नायिका केकी अधिकारीले फेसबुकमा आफ्नो अ’सन्तुष्टि पो’ख्दा गा’लीको ओ’इरो” – Life Nepali
नायिका केकी अधिकारीले फेसबुकमा आफ्नो अ’सन्तुष्टि पो’ख्दा गा’लीको ओ’इरो”
काठमाण्डौं – हालै कलाकार दीपाश्री निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राजेश हमाललाई ‘उहाँ महानायक हो र!’ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भयो। यस विषयमा नायिका निरौलाले हमालका फ्यानसँग माफी नै माग्नुपर्‍याे। यही विषयमा अहिले नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो अ’सन्तुष्टि पोखेकी छन्। उनले आमालाई पात्र बनाएर व्यंगात्मक शैलीमा दीपाश्री महिला भएकै कारण हेपिनुपरको आशय प्रकट गरेकी छन्।
‘विगत केही हप्तायता आमा त्यसै त्यसै त्र’सित हुनुहुन्छ। फेसबुकमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न आमा, तर आजकल हर दिन हर घन्टा आमाको आँखा अनि ध्यान फेसबुकमै हुन्छ। नसा लाग्यो कि क्या हो आमा भनेर सोधेको, होइन तिमीले केही लेखेको छौ कि भनेर हेरिराको भन्नुभो। अहिले चर्किरहेका विषयमा केही भन्ने वा लेख्ने नगर है भन्नुभो,’ फेसबुकमा नायिका अधिकारीले लेखेकी छन्, ‘ म एकछिन् घो’त्लिए अनि सोचें, गल्ती त हाम्रै हो नि दीपा दी, पहिलो ग’ल्ती त तपाईं छोरी भएर जन्मिनु भो।’
अभिनेत्री केकी अधिकारीले निरौलाको साथ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीवि’रुद्ध गा’लीगलौज आउन लागेको छ । धेरै जसो मानिसले कलाकारीता क्षेत्रबाट ह’राउनै लाग्दा निरौलाको फिल्ममा काम पाएका कारण उनैको साथ दिएको समेत जनाएका छन् । सामासजक सञ्जाल फेसबुकमा अधिकारीले निरौला महिला भएकै कारण उनी अनावश्यक वि’वादमा तानिएको बताएकी छन् ।
अहिले उनले सामाजिक संजालमा लेखेको पोस्टमा अधिकांसले उनको खुलेरै बि’रोध गरेका छन् भने कतिले नेपाली कलाकारलाइ बहिस्कार गर्ने भन्दै कमेन्ट गरेका छन् । पहिले उनले लेखेको स्टाटस यस्तो थियो पढ्नुहोस :
अधिकारीको फेसबुक स्टाटस : बिगत केही हप्ता यता आमा त्यसै त्यसै त्र’सित हुनुहुन्छ। फेसबुकमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न आमा तर आजकल हर दिन हर घन्टा आमाको आँखा अनि ध्यान फेसबुक मै हुन्छ। नसा लाग्यो कि क्या हो आमा भनेर सोधेको, होइन तिमीले केही लेखेको छौ कि भनेर हेरिराको भन्नुभो। अहिले चर्किरहेका विषयमा केही भन्ने वा लेख्ने नगर है भन्नुभो। सहनै गाह्रो हुने प्रतिक्रियाहरु आउछन् अनि मेरो मन भतभत पोल्छ भन्नुभो।
म एकछिन घोत्लिए अनि सोचेँ, ग’ल्ती त हाम्रै हो नि दीपा दी,पहिलो ग’ल्ती त तपाईं छोरी भएर जन्मिनु भो। ल त्यस्मा हाम्रो केही चल्दैन, अनि फेरि तपाईं सफल चाहिँ किन हुनुभो? ल त्यो पनि पचाउने प्रयास गरुला , अनि फेरि तपाईंले भ’यंकर गर्नुभो के , होइन आफ्नो भनाइ अनि बिचार किन राखेको भन्या के ? अनि फेरि तपाईंले कसैको चित्त नदुखाउन माफी मागेर अति गर्नुभो। यो त पराकाष्ठा नै भैगोनी।
ग’ल्ती मान्छेबाट पो हुन्छ त, माफी मान्छेलाई पो दिइन्छ त। अनि थाहा पाइपाइ यत्रो अपराध गरिदिने? हामीलाई तेस्तो अनुमती छ र? यहाँ कुनै दीपा, पूजा , बर्षालाई ग’ल्ती गर्ने छुट छैन है। भन्देको छु नी। मान्छे बन्ने कोशिस नगर्नु। ल आमा तपाईंले यो पनि हेरिहाल्न्नु हुन्छ, त्यसैले ढुक्क हुनु है। मैले तेस्तो केही लेखेको छैन। हाम्रो समाजकै समर्थनमा लेखेकी छु। मैले मरनासन्न हुने गरि गा’ली खान्न होला। मेरो चरीत्र जोगिन्छ होला।
Previous खुसिको खबर : नेपालमा एकै दिनमा थप १ सय ४७ जना कोरोना संक्रमणमुक्त !( विवरण सहित )
Next खुसिको खबर – कोरोना खोप परीक्षण सफल भएको वैज्ञानिकहरुको दाबी !